प्रेममा निकै बफादार हुन्छन् यस्ता युवती « Lokpath
१७ मङ्सिर २०७८, शुक्रवार
प्रेममा निकै बफादार हुन्छन् यस्ता युवती
प्रेम अपनत्वको भाव हो । “प्रेम” मजबूत स्नेहको एक भावना र व्यक्तिगत लगाव हो । केही युवतीहरु युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् भने कोही युवतीहरु भने सोच विचार गरेर मात्रै प्रेम गर्छन । प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु आफैमा बौद्धिक हुन्छन् । उनीहरुलाई समझदार मानिन्छ तर, पहिला नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरु कस्ता हुन्छन् होला ? उनीहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? र उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त ? आउनुहोस् जानौं, पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरुको बारेमा ।
A नामका युवती
पहिलो अक्षर ए हुने युवतीहरुको स्वाभाव इमोशनल हुन्छ । यिनीहरु कुनै युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् । यस्ता युवतीहरु छिट्टै पार्टनरलाई विश्वास गर्छन् । ‘एक्स्ट्रा केयरिङ’ प्रकृतिका यस अक्षरवाली युवती जीवनभरी पार्टनरको साथ छोड्दैनन् ।
B नामका युवती
यस अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती संवेदनशील हुन्छन् । र, छिट्टै प्रेममा पर्छन् । उनीहरु आफ्नो साथीको बानीको बारेमा सचेत हुन्छन् । आफूले आशा गरेजस्तो नभएमा बिना साथी रहन पनि स्वीकार गर्छन् ।
G नामका युवती
यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेमको चक्करमा पर्छन् । पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने यस्ता युवतीहरु साँचो प्रेम गर्छन् । र जस्तो सुकै कठिन परिस्थितीमा पनि जीन्दगीभर साथ निभाउँछन् ।
M नामका युवती
यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती दिलवाली हुन्छन् । जति छिट्टो प्रेममा पर्छन् । जो उनीहरुको जीवनमा आउँछन् उनीहरुलाई जीवनभरी साथ छोड्दैनन् ।
P नामका युवती
प्रेम विवाहमा विश्वास गर्ने यस्ता युवतीहरु पनि छिट्टै प्रेममा पर्छन् । यिनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई कहिल्यै धोका दिँदैनन् । यद्यपि, यिनीहरुले कहिल्यै साँचो प्रेम पाउँदैनन् ।
T नामका युवती
यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेममा पर्छन् तर व्यक्त गर्नलाई हिच्किचाउँछन् । तर यिनीहरु आफ्नो प्रेम पाउनको लागि जे पनि गर्छन् । र जीन्दगीभर आफ्नो साथीको साथ छोड्दैनन् । एजेन्सीबाट साभार
प्रकाशित मिति: २०७६,श्रावण,२०,सोमवार १२:३५
अझै पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता : यस्तो छ पानीको पीडा
पाल्पा । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–५ मुझुंगका टोड्केमा अझै खानेपानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । सरकारले ‘एक घर, एक
ध्यू कुमारी खाँदै हुनुहुन्छ ? यो कुरा पनि थाहा पाउनुहोला
ध्यू कुमारी (एलाे भेरा) लाई धेरै नै बहु गुणकारी बिरुवा मानिन्छ । सदियौँ देखि विभिन्न किसिमका रोग व्याधि देखि समस्याहरूलाई
किन खतरनाक मानिन्छ कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन ?
काठमाडौं । कोभिडको महामारी विश्वमा फैलिएको लगभग दुई वर्ष भइसक्यो । यो अवधिमा कोरोनाका विभिन्न भेरिएन्टहरुले विश्व समुदायलाई फरक फरक
युरिन इन्फेक्सनबाट जोगाउने योग आसनहरू
पिसाब पोल्ने (युरिन इन्फेक्सन) को समस्या अधिकांश महिलाहरूमा देखिने गर्छ । यो समस्याको मुख्य कारण भनेकै बदलिँदो जीवनशैली र सरसफाइमा
कांग्रेस प्रदेश १ सभापतिमा दुईजनाको उम्मेदवारी
भक्तपुरमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु माधव नेपालको पार्टीमा प्रवेश
कपिलवस्तुमा डुबेर बालिकाको मृत्यु
दक्षिण सुडानमा नेपाली शान्ति सैनिकले गर्यो यस्तो काम
कांग्रेस महाधिवेशन : सुदूरपश्चिममा केन्द्रको हस्तक्षेप बढ्दा गुटउपगुटबीच प्रतिस्पर्धा हुने
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न
आज दिनभर के-के भए भए ? मुख्य १५ समाचार हेर्नुहोस्…